Otu esi ezere mmefu na -atụghị anya na akụ na ụba ụlọ | Bezzia
Otu esi ezere mmefu na -atụghị anya ya na akụ na ụba ụlọ
Bezzia | 29/09/2021 10:36 | Emelitere ka 29/09/2021 10:38 | Home
Ụzọ kacha mma iji lekọta akụ na ụba ụlọ bụ ijikwa mmefu ego ezinụlọ nke ọma, mana nke ahụ abụghị nkwa mgbe niile maka ihe ịga nke ọma. N'ihi na, ọ bụrụgodi na -ejikwa akụ nke ezinụlọ na -ejikwa ya nke ọma, ihe ndị a na -atụghị anya ya bụ ihe a na -apụghị ibu amụma. Ya mere, naanị ụzọ ị ga -esi mesoo ha bụ site na ịdọpụ ego echekwara, ma ọ bụrụ na ị nwere ha, ma ọ bụ site na ị nweta mkpuchi ụlọ.
Inwe mkpuchi ụlọ gị bụ ụzọ kachasị mma iji hụ na udo nke uche megide mmefu a na -atụghị anya ya. Ị nwere ike ịzụta mkpuchi site na ụlọ ọrụ ịnshọransị n'ịntanetị dịka Verti, site na ịkpọ ma ọ bụ jụọ ịntanetị maka ndị insurers na ụdị mkpuchi dị iche iche. N'ọnọdụ ọ bụla, uru ndị a enweghị atụ.
1 Uru nke ịzụrụ mkpuchi ụlọ
1.1 Na kọntinent ahụ
1.2 Ihe di n'ime
1.3 Ụrụ obodo
2 Nchedo megide nrụzi, izu ohi, ọkụ, ...
Uru nke ịzụrụ mkpuchi ụlọ
N'ozuzu, mkpuchi ụlọ nwere usoro nke mkpuchi isi, nke enwere ike ibute ọnọdụ dị mma site na ọnụ ahịa dị iche iche. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ihe mkpuchi kachasị.
Na kọntinent ahụ
Kọntinent bụ nhazi ụlọ dị ka nke a, ya bụ, uko ụlọ, mgbidi na nkewa, ala, netwọk eletriki, ọkpọkọ na ihe niile bụ akụkụ nke ihe onwunwe. Dabere nha na ụdị ụlọ ahụ, a na -agbakọ ego a ga -akwụ iji hụ na ọ ga -akwụ ụgwọ mkpuchi mkpuchi.
Ka aha ya na-egosi, ọ bụ maka ihe niile eji arụ ụlọ: arịa ụlọ, ngwa, teknụzụ, ọla, uwe na ihe onwe onye.
Nkwenye a bụ isi nke mkpuchi mkpuchi ụlọ niile na -ekpuchi mmebi nke enwere ike ime ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ịwụfu mmiri, mwụfu, nkwụsị iko, wdg.
Nchedo megide nrụzi, izu ohi, ọkụ, ...
N'iburu ihe mkpuchi ndị a n'uche, uru dị n'inweta mkpuchi mkpuchi ụlọ dị mkpa. N'ihe nrụzi, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ọ ga -edozi pipụ gbajiri agbaji, nrụnye eletriki, ma ọ bụ nsogbu na mwụfu mmiri, ụgwọ na -adịkarị elu, yabụ ịnwe mkpuchi nke a ga -ekpuchi ụgwọ ahụ.
Ihe ọzọ dị mkpa ị ga -atụle bụ na -ezu ohi. Ma ị nọ n'ụlọ ma ọ bụ na ị nọ ezumike, izu ohi nwere ike ime n'oge ọ bụla. Ihe ndị a na -agụnye ọ bụghị naanị izu ihe, kamakwa mmebi na mfu akụ na ụba nke na -aba nnukwu uru mgbe ụfọdụ. Inye mkpuchi ụlọ nwere ike kpuchie ego niile nke izu ohi ma ọ bụrụ na ekwuru nke a na iwu.
Ọkụ Ha bụkwa ezi ihe kpatara ịkpuchi ihe onwunwe, n'ihi na, n'agbanyeghị na ọ nwere ike iyi ihe na -adịghị mma, na Spain a na -emepụta puku kwuru puku n'ime ha kwa afọ n'ihi nsogbu ọkụ eletrik. Mfu sitere n'ọkụ nwere ike ịdị oke elu.
La ọsọ nke ime ihe Ọ bụ uru ọzọ dị oke ọnụ ahịa mgbe ị na -ewe mkpuchi mkpuchi ụlọ. Ndị ọkachamara na -aga n'ụlọ mebiri emebi ozugbo enwere ike, mkpuchi ahụ na -adịkwa irè n'oge ezi uche dị na ya.
Ma enyemaka ahụike na iwuImirikiti amụma mkpuchi nke ụdị a gụnyere nnyefe ụgbọ ihe mberede ma ọ bụrụ ọrịa ma ọ bụ ọrịa, yana ọrụ ahụike mberede ndị ọzọ. Tụkwasị na nke a, na esemokwu iwu, a na -enye ndụmọdụ gbasara iwu na nchedo nke nwere ike kpuchie ọnụ ahịa nke ikpe ga -ekwe omume, dị ka ebubo maka mmebi, ịgbachitere mpụ, ikpe, wdg.
Ọzọkwa, n'agbanyeghị na ọtụtụ ndị amaghị maka ya, Ịnweta mkpuchi ụlọ na -echebe ndị ezinụlọ niile, gụnyere anụ ụlọ. Imirikiti ngwaahịa ndị a gụnyere mkpuchi mkpuchi obodo ma ọ bụrụ na anụmanụ ibe ya na -emebi ihe ọ bụla ma ọ bụ nke onwe ya na ndị ọzọ, n'etiti ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Otu esi ezere mmefu na -atụghị anya ya na akụ na ụba ụlọ
Henna na nku anya: Chọpụta ihe ọ nwere ike imere gị!